Voninahitr’i Kristy – Athis Fanantenana
Sekoly Alahady 1 novambra
Fiaraha-mivavaka… 1 novambra
MOFON’AINA ALATSINAINY 27 JOLAY 2020
Ary Jesosy niverina tamin’ny herin’ny Fanahy nankany Galilia;…
MOFON’AINA ALATSINAINY 02 DESAMBRA 2019
2 desambra 2019
Ny olona izay mandeha amin’ny maizina dia mahita mazava lehibe; Izay mitoetra amin’ny tany aloky ny fahafatesana no iposahan’ny mazava. 2. Hamaroinao ity firenena ity, Ary ampitomboinao ny hafaliany; Mifaly eo anatrehanao izy tahaka ny hafaliana amin’ny fararano, ary tahaka ny fifalin’ny olona, raha mizara babo. 3. Fa ny bao fitondran-entany sy ny tsorakazo nikapohana […]
Mofon’aina – ALAROBIA 31 JANOARY 2018
31 janoary 2018
Jesoa, Voninahitr'i Kristy
Rehefa nampitenenin’ Andriamanitra tamin’ ny razana fahiny ny mpaminany tamin’ ny andro samy hafa sy ny fanao samy hafa;…
oktobra 2020 (1)